★မြန်မာ့အလင်း★: The Development ofaMuslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)
Publish at Scribd or explore others: Religion & Spiritual History History-Asian Arakan
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:56 AM
I don't know. said...
ဦးရွှေဇံတို့ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေ အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရေးထားတာကိုလဲ ချပြသင့်တယ် ထင်တယ်နော်
စကောလောက်မှာ ဇောက်မနက်တဲ့ကောင်၊ မအေနှမ ဆဲတဲ့စာကို အရှက်မရှိလိုက်ဖြန့်နေတဲ့ကောင်
ငါလည်းဗုဒဓဘာသာပဲ။ ဒီလောကမှာ မင့် တယောက်တည်း ဗုဒဓဘာသာကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဗုဒဓဘာသာတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကို ချစ်တယ်။
ဗုဒဓဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့မင်းငါတို့ကို လာပြောစရာမလိုဘူး။ ငါတို့ဦးနှောက်ရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို ရီုက်သတ်တဲ့ကောင်တွေက အခုလာပြီး ဘာသာကိုချစ်ပါလေး ဘာလေး လာ တရားချနေတာ ငါတို့ကို လာစော်ကားနေတာကွ။ အော့နှလုံးနာတယ်။
ဒီမှာ -- အစက မင်းလို အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်နဲ့တုမပြောချင်လို့ မင့်အီးမေးတွေကို ဖျက်ဖျက်နေတာ။ အခုတော့ ခနခန ရောက်လာလို့ တုန့် ပြန်ရမယ်။ သိပ်ပြောချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ မင့်အီးမေး ငါ့ ဂျီမေးမှာ တွေ့ တွေ့ ရတာ ကျက်သရေတုံးတယ်။ အမင်္ဂလာ ဖြစ်တယ်။ မနက်မိုးလင်းလို့ အီးမေးကြည့်ရင် ကျက်သရေ မင်္ဂလာမရှိ မအေ နှမဆဲတဲ့ အီးမေး ငါမမြင်ချင်ဘူး။ လူသတ်အစိုးရလက်ပါးစေဆီက လူသတ်ခိုင်းတဲ့ အီးမေးငါမမြင်ချင်ဘူး။
သေချာ မှတ်ထား- မြန်မာပြည်သူတွေက Stupid မဟုတ်ဘူး။ စဉ်းစားတတ်တယ်။
စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းတုန်းက ငါတို့ ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်သတ်တာ ကုလားတွေမဟုတ်ဘူးကွ။ မင့်တို့ လို စစ်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ။ အဲ့ဒီတုန်းက ကုလားတွေက ဘုန်းကြီးတွေကို ထောက်ခံလို့ မင်းတို့အခု ကုလားတွေကို မဲနေတာမလား။
၈၈ တုန်းက ဘုန်းကြီးသင်္ဃန်းတွေကို ပင့်ပြီး အောက်ကနေ ဗက်နက်နဲ့ ထိုးသတ်တာ ကုလားမဟုတ်ဘူးကွ။ မင်းတို့ကို လူသတ်ကောင် စစ် မိစာတွေ။ ဘုန်းကြီးတွေကို မီးရှီု့သတ်တာလည်း မင်းတို့ တွေပဲ။
မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်း ၅၀ လုံး နှိပ်စက်တာ ကုလားမဟုတ်ဘူးကွ။ မင်းပထွေး စစ်အစိုးရ။
မြန်မာပြည်ကို အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ စပါးချီကနေ အမွဲတေဆုံး အသိမ်ဖျင်းဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်း ကုလားတွေ မဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ ပထွေးတွေ။
နေရာတကာမှာ ဟောက်လိုက် ငေါက်လိုက်နဲ့ပြည်သူဆီက ဂုတ်သွေးစုပ်နေတာ မင်းတို့ ကို စစ်ခွေးတွေကွ။
နာဂစ်ဖြစ်ခါနီး ကုလားပြည်က ပေးတဲ့ သတိပေးချက်ကို လျစ်လျူရှုတာ၊ မုန်တိုင်းထိတဲ့ သိန်းနဲ့ချီသေတဲ့လူတွေကို လျစ်လျူရှတာ၊ ဒုကသည်တွေကို မကယ်ပဲ အတင်းမဲထဲ့ခိုင်းတာ။ နိုင်ငံခြားက အကူအညီပစည်းတွေကို ဓားပြတိုက်ပြီး ဒုကသည်တွေကို အငတ်ထားတာ ကုလားတွေမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့လို စစ်ခွေးတွေနဲ့သူတောင်းစား ဓားပြ ကြံ့ ဖွံ့တွေ။
ငါတို့ တိုင်းပြည်ကို ဒုကပေးတာ မင်းတို့ အုပ်စုပဲရှိတယ်။
ငါတို့ ရာဇ၀င်မှာ ငါ ဘာသာကို စော်ကားတာ မင့်တို့ တသိုက်ပဲရှိတယ်။ ငါတို့ ဘုန်းကြီူကို ရိုက်သတ်တာ မင်းတို့ ပဲရှိတယ်။ ငါတို့ဘာသာကို ကာကွယ်ရမှာ ကုလား ဆီကမဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့လို လူသတ်ဒိတ်ထိတွေဆီကကွ လူသတ်ကောင်ရ။
အခုလည်း မင့်တို့ ပထွေးတွေ အာနာ မြဲအောင် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ငါတို့ ကို ကုလားနဲ့ လာ တိုက်ပေးနေတာမလား။ ပါးစပ်က ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်ပါဆိုပြီး ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို အဖက်ဖက် က နှိပ်စက်နေတာ မင်းတို့တွေကွ။
အဆင့်အတန်းမရှိ ယုတ်ညံ့တဲ့ အီးမေးတွေနဲ့ လာတရားမချနဲ့ ။ မင်လို လူသတ်ကောင်တွေက ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီး လူသတ်ခိုင်းတဲ့ တရား ငါတို့ နာ စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
မြန်မာပြည်သူတွေက မင့်တို့ကောင်တွေလို ဦးနှေက်မရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။
မင့်အဲ့ဒီလို ယုတ်ညံ့တဲ့ အီးမေးတွေနဲ့သူများဘာသာကို စော်ကားတာ မဆန်းပါဘူး။ ကိုယ့် ဘုန်းကြီးတွေကိုတောင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်သတ်သေးတာပဲ။
ဒီမှာ - မင့် ရေးတာကို ရပ်တန်းကရပ်၊ မင်းကို မင်းသိပ်ဟုတ်ပြီးမထင်နဲ့ ။ မင့်ရဲ့ စာတွေက ငါတို့ ပြည်ကို လူသတ်ကွင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့စာတွေကွ.
အေ - မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာ သိတဲ့ကောင်တွေက သိတယ်။ မင်းဘယ်မှာနေလဲဆိုတာ ကိုသိတယ်။ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မလုပ်ချင်လို့ငြိမ်နေတာ။ အီးမေး အတု တခုပြီး တခု ဖွင့် ရူံနဲ့ မင်းကို ခြေရာလို့မရဘူးလို့မထင်နဲ့ ။ မင်းနဲ့မင်းသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်း သိတဲ့ကောင်တွေက သိထားတယ်။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေထဲကတောင် မင်းကို မကြည်ဘူးဆိုတာကို မမေ့နဲ့ ။
နောက် တခေါက်ထပ်ပြောလိုက်အုံးမယ် - ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်သတ်တဲ့ကောင်တွေ ခွေးလောက်တောင် ကျက်သရေမရှိတဲ့ ကောင်တွေဆီက တရားချအီးမေး ငါ့ Inbox ထဲနောက်တခါထပ်မတွေ့ ချင်ဘူး။
မင်း တကယ် ဗုဒဓဘာသာကို ချစ်ရင် ထောင်ချခံထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပြန်လွတ်ပါလား။ ကိုယ့်ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ ထောင်ချထားပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုချစ်ပါဆိုပြီး လာမပြောနဲ့။ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားလာမပြောနဲ့။ စက်တင်ဘာအကြောင်းပြန်သတိရရင် ရင်နာတယ်။
မင်းကို ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်မယ်။ ဒါတောင် စိတ်ထိန်းပြီးပြောနေလို့ ။ မင်းလို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြန်မဆဲချင်လို့ ။
(ဒါက တခြားသူရေးထားတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်စာလေးကို နှစ်ဘက်မျှတွေးကြည့်ရအောင်ပို့ပေးတာပါ။..... )
ကျေးဇူးပြုပြီး... အသုံးမ၀င်တဲ့.. အဓိပာယ်မရှိတဲ့စာတွေ.. ဘာသာဝင်တွေကြား ရန်တိုက်ပေးတဲ့ အဆင့်မရှိတဲ့စာတွေ.. မပို့ပါနဲ့....။ အားလုံး အသိတရားဝင်ကြပါစေ...။ အမှန်တရားကို ဦးနှောက်ရှိတဲ့လူတိုင်း စဉ်းစားတတ်ပါလိမ့်မယ်..............